အာဖျံကွီးနဲ.ကုလားကြီး (Myself & India Man) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အာဖျံကွီးနဲ.ကုလားကြီး (Myself & India Man)
အာဖျံကွီးနဲ.ကုလားကြီး (Myself & India Man)
Posted by အာဖျံ ကွီး on Dec 9, 2010 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
အာဖျံကွီး ၅ တန်းဖြေပီးလို. ရန်ကုန်ကိုလာလည်တုန်းကပေါ့ဗျာ …
ဟိုဘုရားဖူး၊ ဒီဘုရားဖူး၊ ဟိုဟိုဒီဒီ ကစားကွင်းတွေ လျှောက်သွား၊ အသိတွေအိမ်လည်နဲ. အာဖျံကွီးတစ်ယောက် အလုပ်တွေရှုတ်နေတာလေ … ;)
တစ်နေ.တော့ အာဖျံကွီးရဲ. ချစ်လှစွာသော အမေက အသိအန်တီတစ်ယောက်နဲ. ကိစ္စရှိလို. အပြင်သွားကြမလို.တဲ့။ အာဖျံကွီးကို “နေပူတရ် သမီးရယ် … မလိုက်နဲ.တော့” တဲ့။ အာဖျံကွီးပဲ … လျှော့တွက်လို.ဘယ်ရမလဲ “မကျန်နေခဲ့ဘူး … လိုက်မရ်” ပေါ့လေ။ အဲဒါနဲ.ပဲ ချစ်လှစွာသောအမေတို. နောက်ကပါသွားရော။
နေကလဲ ပူလိုက်တာ ပြောမနေနဲ.တော့၊ အရေးထဲ လိုင်းကားကလဲ အသကုန်
ကြပ်မှကြပ်၊ စိတ်တွေလဲ တော်တော်ကိုပိန်နေပီ၊ ဇွတ်လိုက်လာတာကို နောင်တကရချင်နေပီ။ “အာဖျံကွီးတို.က ကိစ္စရှိလို.အပြင်သွားတာကို လူတွေကကိစ္စလဲမရှိပဲနဲ. တမင်သက်သက် လိုင်းကားကြပ်အောင် လျှောက်သွားနေကြတရ် :'( ” ဆိုပီးတော့လဲ ကလေးအတွေးနဲ. ဒေါသထွက်လိုက်သေးတရ်။
ခဏနေတော့ ချစ်လှစွာသောအမေတို. သွားတဲ့အိမ်ရောက်ပီ။ အိမ်ထဲဝင်ပီးမှ ချစ်လှစွာသောအမေက ချွေးတလုံးလုံးနဲ. ဖြစ်နေတဲ့ အာဖျံကွီးကိုသတိထားမိပီး (တစ်လမ်းလုံး အာဖျံကွီးကို ဂရုမစိုက်နိင်ဘဲ သူ.အသိနဲ. တွက်ထိုးနေတရ်လေ ) “ငါ့သမီးလေး တော်တော်ပင်ပန်းနေပီလား” ဆိုပီး အာဖျံကွီးရဲ.ခေါင်းကို ငုံနန်းလိုက်တာ “အမလေး … ငါ့သမီးခေါင်းက ချိုင်းချွေးစော်နံလိုက်တာ” ဆိုပီးထအော်ပါလေရော။
အာဖျံကွီးလဲ ဘာဖြစ်လို. ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို. စဉ်းစားလိုက်တော့ … အာလာလာ … လိုင်းကားပေါ်မှာ … စွပ်ကျယ်နဲ. ကုလားဝတုတ်ကြီးတစ်ယောက်ဗျာ … တန်းလေးကိုင်ပီး အာဖျံကွီးဘေးမှာ မတ်တပ်ကြီးရပ်လို. … အာဖျံကွီးရဲ.ခေါင်းက ကုလားဝတုတ်ကြီးရဲ. ချိုင်းအောက်မှာ ……..
တစ်လမ်းလုံးချိုင်းအောက်ရောက်နေတာ အိမ်ကျမှသတိရသလား အာဖျံကွီးရေ…….. ရယ်ရတယ်
လူတွေကကိစ္စလဲမရှိပဲနဲ. တမင်သက်သက် လိုင်းကားကြပ်အောင် လျှောက်သွားနေကြတရ်
အမှန်တကယ်ကတော့ … ချိုင်းချွေးနံ့..ဆိုသည်မှာ ကုလားကြီးမှမဟုတ်..တရုတ်ကြီး..ဘိုကြီးတွေလည်းနံတာပါပဲ..။
ဒါကြောင့် … ရေးမွေးတွေကို သူတို့ဆီကအများဆုံးထုတ်တာဆိုပဲ..
ကျွန်မထင်တာတော့ ကုပ္ပလီတွေက အနံဆုံးထင်တာပဲ …
နွေရာသီဆို သူတို့ရဲ့ လေညာအရပ်မှာတောင် ဖြတ်မလျှောက်ရဲဘူး …
အာဖျံ နဲ့ ကုလားကြီး ဆိုလို့ ဖတ်လာလိုက်တာ.. တောက်လျောက်.. ကုလားဆိုတဲ့ အသုံး နောက်ဆုံးမှဘဲ.. အော်.. သူပြောချင်တာ ဒါကိုးးး လို့ သိလိုက်ရတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကြည့်တော့ ကုလားကြီးနဲ့ ရန်များ ဖြစ်သလားလို့ပါ..
အော်—အာဖျံကွီးဆိုတာ ယောက်ျားလေးထင်နေတာ။ ခုမှဘဲ ရှင်းတော့တယ်။
မဝီးတွေ့ဘူးတဲ့ လူတွေက အာဖရိက ကလူတွေနဲ့ ဆိုမားလီးယား တွေဘဲဖြစ်ရမယ်
ကိုယ်တွေ့ပေါ့ … သူတို့နဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲမှာ အတူတူနေတာလေ …
(တစ်ခန်းထဲတော့ မဟုတ်ဘူးနော် … )
သူတို့အကြောင်းကတော့ မမြလေးပြောသလိုပဲ .. ပြောကို မပြောချင်တော့ပါဘူး ..
ညအိပ်ယင်ဘယ်လိုအိပ်တဲ့အကြောင်းလေး မကြားဘူးသေးတဲ့လူတွေရှိနေသေးတယ် ပြောပြလိုက်ပါ မမြလေးရယ်….အဲ့ယောင်လို့ …ဒေါ်ဝေရယ် ဟဲဟဲ….
အာဖျံကွီးနဲ့ တရုတ်ကြီး၊ အာဖျံကွီးနဲ့ ဂျပန်ကြီးတို့ ရှိရင်လည်းလုပ်ပါအုံး။ အာဖျံကွီးနဲ့ ကိုကြောင်ကြီးကတော့ အွန်လိုင်းဂေဇက်ပေါ်မှာလေ။
လိုင်းကားစီးရတာ အဲ့ဒါတစ်ခုက ပြသနာရှိတယ် … ။ အီးတုံးအကျင့်က သူများဆီက အနံ့ဆိုးဆိုးရရင် အန်ချင်တာပါပဲ …။ ကားပေါ်မှာ သူများအန်တဲ့အနံရပြီး မေ့လဲတော့မလို ဖြစ်ဖူးတယ် ။ နောက်ပိုင်းတော့ ကားစီးရင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သေချာကြည့်ပြီးမှစီးတယ် ။ ကြပ်နေရင် ထပ်စောင့်တယ် ။ စောင့်လို့မလာရင်တော့ ကားငှားလစ်တယ် ။ အရေးကြီးရင်တော့ ဘယ်သူငယ်ချင်းကားခေါ်သုံးလို့ရမလဲ စဉ်းစားတယ် ။
ကျနော်ကတော့ လွယ်အိပ်ထဲမှာ ရှုဆေးကောင်းကောင်းအမြဲပါတယ် အဲ့အနံ့တွေရလာရင် မူးလွန်းလို့ တနေကုန်အလုပ်လုပ်ရတာ မပင်ပန်းဘူး လိုင်းကားစီးပြန်ရတာ တော်တော်ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်တယ် ရန်ကုန်မှာအမြဲလိုင်းကားစီးနေကြတဲ့သူတွေကိုတော့ ကျနော်ချီးကျူးတယ် သူတို့ရဲ့သီးခံခွင့်လွှတ်နိုင်မူကတော့စံပါပဲဗျာ
(ချာတူးရဲ. ဂျိုစောင်း၊ ခွက်စောင်း၊ မျက်စောင်း၊ ချိုင့်စောင်း၊ လက်စောင်း အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိသူ)
အာဖျံ ကွီး ဆိုတော့ တရုတ်မလေး ပေါ့
(အာဖျံကွီးရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ ခွက်ပြောင်ခြင်း (ဥပမာ ထိပ်ပြောင်ခြင်း)အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိသူ
သူကြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မန့်ပေးတာ ပွိုင့်လဲမတိုးဘူး လော့အောက်လုပ်ပြီး ကြည့်တော့ ကို့မန့်ထားတာလဲမတွေ့တော့ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ ပြောပြပေးပါဦး